မန်ယူနှင့်မန်စီးတီးကို ပေါင်းစပ်ပြီး စူပါကလပ်တစ်ခုအဖြစ် ပြောင်းလဲရန် စီစဉ်ခဲ့ဖူးသလား? – Play Maker Sports Journal
မန်ယူနှင့်မန်စီးတီးကို ပေါင်းစပ်ပြီး စူပါကလပ်တစ်ခုအဖြစ် ပြောင်းလဲရန် စီစဉ်ခဲ့ဖူးသလား?
၁၉၆၀ခုနှစ်များတုန်းကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နှင့်မန်ချက်စတာစီးတီးတို့ကိုပေါင်းစပ်ပြီး ထိပ်သီးကလပ်တစ်ခုအဖြစ် တည်ထောင်ရန်စီစဉ်ခဲ့ကြဖူးပါတယ်။
ထိုစဉ်ကကလပ်နှစ်ခုလုံး အခုလိုတစောင်းစေနှင့်မျက်ချေးမဟုတ်ကြသေးဘဲ တစ်သင်းနှင့်တစ်သင်းအလွန်ကောင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးများရှိပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းမှာမန်စီးတီးဟာမန်ယူကိုအိုးထရက်ဖို့ဒ်ပျက်စီးမှုကြောင့်သူတို့ရဲ့အိမ်ကွင်းပွဲကို Maine Road မှာကစားခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။
မန္ယူႏွင့္မန္စီးတီးကို ေပါင္းစပ္ၿပီး စူပါကလပ္တစ္ခုအျဖစ္ ေျပာင္းလဲရန္ စီစဥ္ခဲ့ဖူးသလား?
၁၉၆၀ခုႏွစ္မ်ားတုန္းကမန္ခ်က္စတာယူႏိုက္တက္ႏွင့္မန္ခ်က္စတာစီးတီးတို႔ကိုေပါင္းစပ္ၿပီး ထိပ္သီးကလပ္တစ္ခုအျဖစ္ တည္ေထာင္ရန္စီစဥ္ခဲ့ၾကဖူးပါတယ္။
ထိုစဥ္ကကလပ္ႏွစ္ခုလုံး အခုလိုတေစာင္းေစႏွင့္မ်က္ေခ်းမဟုတ္ၾကေသးဘဲ တစ္သင္းႏွင့္တစ္သင္းအလြန္ေကာင္းတဲ့ဆက္ဆံေရးမ်ားရွိပါတယ္။ဒုတိယကမာၻစစ္ကာလအတြင္းမွာမန္စီးတီးဟာမန္ယူကိုအိုးထရက္ဖို႔ဒ္ပ်က္စီးမႈေၾကာင့္သူတို႔ရဲ႕အိမ္ကြင္းပြဲကို Maine Road မွာကစားခြင့္ေပးခဲ့ပါတယ္။